ထိုင်းဘုရင်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့် ဝင်းနဲ့ဇော်အမှု – Think Before You TRUST
Home>>သတင်းအတုစစ်ဆေးခြင်း>>နိုင်ငံရေး>>ထိုင်းဘုရင်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့် ဝင်းနဲ့ဇော်အမှု
တွေးပြီးမှယုံDecember 7, 2020
ထိုင်းဘုရင်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့် ဝင်းနဲ့ဇော်အမှု
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ဆူရတ်ဌာနီခရိုင်၊ ခိုတောင်ကျွန်း(ခ)လိပ်ကျွန်းတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံသားစုံတွဲနှစ်ဦး သတ်ဖြတ်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံသား ကိုဝင်းဇော်ထွန်းနှင့် ကိုဇော်လင်းတို့ကို မုဒိန်းမှု၊ လုယက်မှုနှင့် လူသတ်မှုစတဲ့ စွဲချက် ၇ ခုဖြင့် ကော့စမွေခရိုင်တရားရုံးမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီး တရားရုံးမှဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အယူခံတင်ခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ခရိုင်တရားရုံးမှ ယင်းအမိန့်ကိုပဲဆက်လက်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံဗဟိုတရားရုံးကို ထပ်မံလျှောက်ထားခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်၊ ၁၉ ရက်မှာ အယူခံပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လအတွင်းမှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းဘုရင့်နန်းတော်မှ ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ ကိုဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ကိုဇော်လင်းတို့ကို သေဒဏ်ကနေ တသက်တကျွန်းကို ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အခုလက်ရှိမှာတော့ ထိုင်းဘုရင့်မွေးနေ့ အထိမ်အမှတ်အဖြစ် အဆိုပါ လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု ဖြစ်စဉ်အတွက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ထင်ကြေးတွေ အမျိုးမျိုး ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ …… တရားဝင် သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက် ညနေပိုင်းက Mizzima ရဲ့ သတင်းတင်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ တင်ဆက်တဲ့သတင်းမှာဆိုရင်တော့ ဝင်းနဲ့ဇော် အမှုမှာ မုဒိန်းမှု ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ဒီလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မှာ မပါဝင်ဘူးလို့ ယခုလို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့မှာပဲ နတ်ရွာစံသွားတဲ့ ထိုင်းဘုရင်ဘူမိဘောရဲ့ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်မနေနဲ့ ထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းကျခံနေရသူတွေကို ထောင်ဒဏ် နှစ် (၅၀) ကို ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလျှော့ပေါ့မှုမှာ မုဒိန်းမှုအတွက်သက်ရောက်မှုမရှိတဲ့ အတွက် ဝင်းနဲ့ဇော် မပါနိုင်ဘူးလို့ ထိုင်းရှေ့နေတွေက ပြောဆိုကြောင်းကို ဒီအမှုမှာ လိုက်ပါကူညီနေတဲ့ ကိုမင်းဦးက ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ DVB ရဲ့ သတင်းတင်ဆက်မှုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့မှာပဲ The Voice ရဲ့ သတင်းဖော်ပြမှုမှာ ဆိုရင်တော့ “လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထောင်ဒဏ်နှစ် ၅၀ သိ့ လျော့ချလိုက်သည့် သတင်းမဟုတ်မှန်ဟုဆို” ဆိုပြီးတော့ ဒီလို အခိုင်အမာ တင်ပြထားပါတယ်။
RFA ကတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ သတင်းမှာ “တသက်တကျွန်းကျခံနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား နှစ်ဦး ထိုင်းဘုရင်ရဲ့ ပြစ်ဒဏ်လျော့ပေါ့ခွင့်ရ” ဆိုပြီး တင်ဆက်ထားပါတယ်။ ဒီသတင်းမှာ လိပ်ကျွန်းမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ၂ ဦးသတ်မှုနဲ့ တသက်တကျွန်းကျခံနေရတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမား ကိုဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ကိုဇော်လင်းတို့ မပါဝင်သေးပေမယ့် ထောင်ဒဏ် လျော့ပေါ့ ခံစားခွင့်သာ ရတာကြောင့် နှစ် ၅၀ ပြောင်းလဲခွင့်ရတယ်လို့ ယခုလို တင်ဆက်ထားပါတယ်။
Eleven Media ရဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့ ညနေခင်း သတင်းတင်ဆက်မှုမှာဆိုရင်တော့ “လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုအဖြစ် သေဒဏ်ချမှတ်ခံရသော “ဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ဇော်လင်းတို့အား တစ်သက်တကျွန်းမှ ထောင်ဒဏ်နှစ် ၅၀ သို့ လျော့ပေါ့ ပေးတယ် ဆိုပြီး ယခုလို တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ဒီမနက် ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့မှာ BBC က “နတ်ရွာစံထိုင်းဘုရင့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မှာ ခြွင်းချက်ကြောင့် ဝင်းနဲ့ဇော် မပါ” ဆိုပြီး သက်သာခွင့်ထဲမှာ မုဒိန်းမှု မပါတာကြောင့် ထိုင်းဘုရင်မွေးနေ့ အထိန်းအမှတ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မှာ ဝင်းနဲ့ဇော် မပါဝင်တဲ့အကြောင်း သတင်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။ တစ်သက်တကျွန်းဆိုတာက ထိုင်းမှာ နှစ် ၅၀ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် လျှော့ပေါ့ခွင့် ရရခဲ့ရင်တော့ ၁၀ နှစ် ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလဲ ယခုလို ဆက်လက် ပြောပြထားပါတယ်။
ဒီအမှုမှာပဲ လိုက်ပါကူညီနေတဲ့ ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးအောင်မျိုးသန့်နှင့် တွေးပြီးမှယုံမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာမှာတော့ “ဝင်းနဲ့ဇော်ဟာ သေဒဏ်ကနေ ထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းကို ပြောင်းလဲကျခံရခြင်းသည် ယခုမှမဟုတ်ပဲ ဩဂုတ်လအတွင်းကပဲ ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားပါတယ်။ ယခုထိုင်းဘုရင်မွေးနေ့ လွတ်ငြိမ်းမှာ မုဒိန်းမှုမပါရှိတဲ့အတွက် လွတ်ငြိမ်းခွင့်မှာ မပါဝင်ကြောင်းနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ တသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်သည် ထောင်ဒဏ်နှစ်(၅၀) နှင့် ညီမျှကြောင်း” ဆက်လက်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်း သတင်းမီဒီယာကြီးတွေရဲ့ တင်ဆက်မှုတွေမှာ ဖော်ပြမှုတွေ အမျိုးမျိုး ဖြစ်နေသေးတာကြောင့် တွေးပြီးမှယုံအနေနဲ့ ဒီသတင်းကို ဆက်လက်ပြီး စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ သတင်းတွေကိုဖတ်တဲ့အခါ မှာ ချက်ချင်း မယုံကြည်လိုက်ဖို့နဲ့ သတင်းမှန်လား/ မှားလားဆိုတာကို စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ သတင်းတုလို့ အတည်ပြုနိုင်ရင် Facebook ကို Reportလုပ်နိုင်ပြီး သတင်းတုကို စစ်ဆေးဖို့အခက်အခဲရှိရင်တော့ တွေးပြီးမှယုံ ရဲ့ Chat box ဒါမှမဟုတ် အချက်အလက်စစ်ဆေးပေးရန် အကြောင်းကြားလွှာ ကိုဖြည့်စွက်ပြီး တော့လည်း မေးမြန်းလို့ရပါတယ်။ တွေးပြီးမှယုံအနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ သတင်းတုတွေကို ပြန်လည်စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပေးသွားမှာပါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
UEC အဖွဲ့ဝင်ငါးဦး ထွက်ပြေးဖို့ကြံနေပြီး နိုင်ငံတကာက အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ထွက်ပြေးနေကြပြီဆိုတာတကယ်လား? တပ်မတော်က အိမ်စောင့်အစိုးရဖွဲ့နေပြီဆိုတာကော?
ပီကင်းရဲစခန်းမှ ရဲများ လက်နက်ချပြီး ကယန်းပြည်သစ်အဖွဲ့ထဲပူး​ပေါင်းဆိုတဲ့ သတင်းအမှား
ဝန်ထမ်းများကို လုံလောက်သည့်လစာနှင့်အဆောင်အယောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှား
လူငယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး တောထဲမှာ အချင်းချင်းပစ်သတ်မိလို့ သေဆုံးဆိုတဲ့ ဓါတ်ပုံသတင်းအမှား
၂၀၂၀ NLD အနိုင်ရပါက တိုက်တစ်လုံး၊ ကားတစ်စီး ရမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှား
Excellence News Agency ကတင်ထားသည့် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းတု